Natalia Vasko: yaseshashalazini kanye ifilimu actress, ithelevishini umethuli futhi umuntu aphumelele
Natalia Vasko - actress Ukrainian, engowokuzalwa emzini Chervonohrad, elise saseLviv. Natalia wazalwa Okthoba 19, 1972 ku umndeni umvukuzi abavamile. Abazali bakhe ngicabange ukuthi indodakazi yabo kungaba umdlali waseshashalazini.
Pho wakhumbula uyise actress sika, bayazidlalela njalo, imazisa ukuya emsebenzini njengoba umpheki, ungalokothi ukuba ulambile. Kodwa Natalia njengoba ingane wayazi indawo yakhe emhlabeni art. Wabuye okukhulunywa yesehlakalo kusuka Matinee yokugcina enkulisa, lapho dancing the Polka enaye umfana, wabona kafushane ubuso kamama, babugcwele injabulo, futhi ayefuna kube njalo njalo. Ngisho nangaleso sikhathi, Natalia Waphupha ukuthi ngelinye ilanga wayezoba umdlali waseshashalazini.
Natalia Vasko: Theatre
Lapho ngineminyaka engu-esikoleni, uNatasha wasebenza yaseshashalazini lokusungula zezingane "Fairy Tale", lapho wadlala ezihlukahlukene izindima ezisukela amakhosazana ziphethe ukwethuka. Kodwa indima ngayinye kwamlethela injabulo ethile kanye nesipiliyoni.
Ngemva kokuphothula umatikuletsheni, Natalia Vasko waya Kiev ukwenza e Kiev Theatrical Institute. Karpenko-Kary, kodwa okokuqala akunakwenzeka. Kwaziqondanela nje ukuba ithonywe inqubo luhlolo. Iqiniso lokuthi usuku efulethini ukuhlolwa actress, okuyinto wasephila uNatasha, izikhukhula, futhi kuze kube ngomzuzu wokugcina, wasiza wokutakula izincwadi nezinye izinto eziyigugu. Natalia wagijima cishe ekuqaleni ukuhlolwa, morale yayo ngaleso sikhathi wawunamaphutha, ngakho, eza endaweni yesehlakalo, Vasko akakwazanga ngisho ngempela ukuqonda ukuthi yini eyayidingeka kuye. Ngenxa yalokho, Natalia Vasko akuzange kudlule izivivinyo emnyango futhi baphoqeleka ukuba baphindele lumelele unyaka ezweni lakubo.
Ngonyaka olandelayo, Natalia yabuya, kulokhu ukuhlolwa wafakwa kwi "lemihle kakhulu". Vasko wangena Institute athandwayo, kokuphothula nge-honours ngo-1994.
I-Institute for Heroine wethu washaya isidlaliso zehlathi ezithile Mavka. Bright abadelelayo, enhle "Ukrainian Gothic" - ngoba ngesikhathi wazichaza ngokuthi omunye wothisha. Kodwa yena akasoze uNatasha ngokwalo wazizwa, ngoba ukholelwa ukuthi njalo zineminyaka isiphepho zonke izinhlobo izithombe, sibonga ngalo angabhekana ngayo ngokuphumelelayo indima kwepulani. Futhi kuyiqiniso, ngezansi ungabona esithombeni Natal Vasko, lapho ayethunjwe ezihlukahlukene izithombe okungafani.
Kusukela theory ukuzijayeza
Njengoba umfundi unyaka wokugcina, Vasko iqala ukwenza indima Kiev Theatre of Drama futhi Comedy Theatre, isendaweni ibhange kwesokunxele Dnieper. Ngemva kweminyaka emine, ejoyina Young Theatre, okuyinto wadlala izindima kudlala ezifana "Dance Umjikelezo Uthando", "Romeo and Juliet", "Wesine uDade" nabanye.
Ngo-2000, umdlali wamenywa ukuba isiteshi se-TV "Inter" njengoba uhlelo lwethelevishini okuholela "Ekuseni nge Inter." Lo mcimbi abathintekayo yokuphayona ibe umsebenzi wokuphila okunye njengomdlali waseshashalazini usenesikhathi latholakala cinema imibuthano, bese baya isimemo indima yokuqala ye-serial.
Natalia Vasko: Filmography Umlingisikazi
Ngaphambi kokudubula actress yaseshashalazini ukuvuthwa ngo-2004. Kuze kube kuleli qophelo yanelisekile ngokugcwele umsebenzi ezinkundleni zemidlalo yaseshashalazini. Kodwa ngo-2004 wabizwa ukuba iqhaza ngesikhathi esisodwa ezintathu ewuchungechunge yethelevishini: "Medicine Russian", "Uthando Blind", "Abahwebi".
Ngo-2007, wafika nje phambi kokuba ababukeli kumafilimu ambalwa: "Requiem ngenjongo yokufakaza," "Lokhu akwenzeki", "Ubuhle Territory", "umphathi", "Uxolo Law", "wayeyisazi isikhala esingenalutho".
Kusukela 2010 kuya 2012 Natalia Vasko, empilweni yakho lapho abalandeli bakhe nesithakazelo, inkanyezi e amafilimu "I Milkmaid ka Hatsapetovki", "Bachelors", "Black Sheep," "Island abantu ezingadingekile", "i-Nest Swallow sika", "Ibhokisi Pandora sika".
Kamuva, actress izinkanyezi ku amafilimu "Lucky Ticket", "Amaphupho ngebumba", "Yilokho inja yami," "Butterflies".
Filmography Natalia Vasko uye wahlanganyela amabhayisikobho angaphezu kuka-30. Impendulo yabo bonke ababukeli, ungakhetha indima bhá we Natalie ochungechungeni oluthi "Black Cats", "I Milkmaid ka Hatsapetovki", "Ukubuya Mukhtar" nabanye.
Amaqiniso kanye nezikhathi ezithakazelisayo empilweni
yobumfihlo Natalia Vasko akakwazi ngokuthi bushelelezi. Esikhathini esithile ekuphileni Natalya kwadingeka isikhathi uzizwe kancane umkhaya ujabule. Ekhatsi Kiev, yena nabo bashada futhi wabeletha indodakazi enhle. Kodwa ngokushesha umshado wakhe waphela, futhi onendodakazi encane Natalia waphoqeleka ukuba abuyele ezweni lakubo, ngoba ngaleso sikhathi wayengenayo izindlu zabo enhloko-dolobha. Kodwa ngemva kwesikhathi esithile lo actress uye wathola amandla libuyele khona enhlokodolobha futhi wenza umsebenzi wokuphila njengoba umethuli TV nomlingisikazi yimpumelelo.
Ngo-2017 Natalya Vasko waklonyeliswa kazwelonke Ukraine umklomelo ifilimu wokuqala "Golden Dziga" ku yokuqokela Kuhle Ukusekela Umlingisikazi.
Okwamanje, actress akuyona emshadweni and self-efundisa indodakazi yakhe.
Kevizel Dzheyms actor, emkhayeni wamaKatolika indoda
Bobani intombazane asempumalanga?
Selfie stick: I-izingcingo zomphakathi nokuthi iziphi izinhlobo kukhona
I-Zhizhikin Igor Vitalievich - Umlingisi waseHollywood wemvelaphi yaseRashiya
Kokucindezela e injini amasilinda. Kokucindezela isheke ngemoto injini amasilinda
Defense kweLeningrad Museum: ugcine umlando ukuze kuzuze izizukulwane ezizayo